इजरायल जान भाषा परीक्षा दिएकाको नतिजा सार्वजनिक, सूचना कसरी हेर्ने ? (सूचना सहित) - dautarimedia.com
इजरायल जान भाषा परीक्षा दिएकाको नतिजा सार्वजनिक, सूचना कसरी हेर्ने ? (सूचना सहित)
काठमाडौं । इजरायल जान भाषा परीक्षा दिएकाहरुको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । नतिजामा २ हजार २९ जना उत्तिर्ण भएको देखिएको छ । इजरायलबाट केयरगिभरका लागि नेपाली कामदारको माग भएपछि भाषा परीक्षा लिइएको थियो । ७ हजार ९ जना सहभागी भएको परीक्षावाट २ हजार बढी उतिर्ण भएका हुन् । अब उनीहरुले आगामी प्रकृया चाल्नुपर्छन ।
बैदेशिक रोजगार विभागले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । इजरायल जानका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य छ । उत्रिण भएका परीक्षार्थीहरुबाट पनि अब १ हजार नेपाली कामदार छनौट गर्न दोस्रो प्रकृया सुरु हुनेछ ।
अब उचाइ र तौल जाँच वाट एक हजार जना छनौट गरिने छ । उक्त परीक्षणका लागि असोज, १, २ र ३ गते बिहान र दिउँसोको समय निर्धारण गरिएको छ । यो क्रम पार गरेपछि उनीहरुको अन्तर्वार्ता असोज ४ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुने विभागले बताएको छ ।
सो चरण पनि पार गरेका परीक्षार्थीहरुको अंक तालिकासहितको विवरण इजरायको निकायमा पठाइने र त्यहाँबाट नतिजा प्रकाशन गरिनेछ । यसरी इजरायल जाने नेपाली कामदारको २५ वर्ष उमेर पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै उचाइ कम्तीमा एक दशमलव पाँच मिटर अर्थात चार दशमलव नौ फिट हुनुपर्नेछ । साथै तौल पनि कम्तिमा ४५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
Previous: आधा घण्टा पानीमा डुब्दा पनि केही नहुने आइफोन–१३ का ४ सार्वजनिक मोडल र सुविधाहरु यस्ता छन्
Next: टिकटक बनाउँदा यसरि सेती नदीमा ख’सेकी रहेछिन्, भिडियो भयो सार्बजनिक